Ra’iisulwasare ku xigeenka dalka oo la kulmaya Madaxweynaha Koonfurta Suudaan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisulwasare ku xigeenka dalka oo la kulmaya Madaxweynaha Koonfurta Suudaan
Ra’iisulwasare ku xigeenka dalka oo la kulmaya Madaxweynaha Koonfurta Suudaan
Ra’iisal-wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed(Khadar) oo ku sugan magaalada Bujunbura ayaa lagu wadaa inuu kullan la qaato madaxweynaha dalka Burundi,isagoona kala hadli doono xoojinta xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Burundi.
Labada Mas’uul ayaa sidoo kale waxay ka wada xaajoon doonaan howlgalka Midowga Africa AMISOM ee Soomaaliya,maadama Burundi ay ka mid tahay dalalka ay Ciidamada ka joogaan Soomaaliya si ay Dowladda Federaalka Soomaaliya uga caawiyaan dagaalka ka dhan ah Kooxda argagixisada Al-Shabaab.
Ra’iisul Wasaaraha ku-xigeenka dalka,Mahadi Maxamed Guuleed ayaa dhanka kale ku bogaadiyay ciyaartoyda Da’dooda ka hooseyso 17-jirada ee dalkaeenna Soomaaliya meesha wanagsan ee ay soo gaareen ee Finalka Bariga iyo Bartamaha Afrika ee xulkeenna Soomaaliya u laqaatay ciyaartoyda dalka Tanzania.
Sidoo kale,Mahadi Maxamed Guuleed Khdar,Ra’iisal ku-xigeenka dalka ayaa kullamo gooni gooni ah la qadan doona mas”uuliyiintii kasoo qayb gashay Ciyaarah Finalka ahaa ee Bariga iyo Bartamaha Afrika,kuwaasi oo uu kala hadli doona sare u qaadista tayada Ciyaartoyda Soomaaliyeed ee ku matasha tartanada Bariga iyo Bartamaha Africa.
Xulkeenna 17-jirada ayaa meel wanaagsan ka gaaray Ciyaaraha bariga iyo bartamaha Africa ee CECAFA ee ku soo dhammaaday dalka Burundi gaar ahaan magaalada Caasimadda u ah ee Bujunbura.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Baladweyn booqdey
Next article29-Ruux oo ay ku jiraan 8-wariye oo lagu dilay Qarax ka dhacay Afghanistan.